Nnukwu Cochọ Mma Nke Ejiri Eke Box-BAM.
Igbe Nnukwu schọ Mma N’igbe
Igbe Sidbb na eriri aka
Ngosiputa onyinye Onyinye
Materiala: 2.00mm chipboard ọkpụrụkpụ kpuchie bọọdụ nka C1S
Inye mmadụ ihe ịchọ mma ịchọ mma anaghị ezuru ma ọ bụrụ na ịnweghị igbe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị iji kpoo ha niile. Igbe a na-adọrọ adọrọ buru ibu, bụ azịza zuru oke nye ihe nzuzo niile ndị ahụ na iji nye gị ezi ụzọ maka ịkwakọba onyinye gị n'otu igbe. Igbe a na-amị amị nke nwere mpe mpe akwa bụ ihe na-atọ ụtọ ma nwee ọdịdị dị mma. Nye ndị ị na-elekọta hụ igbe a ịchọ mma setịpụrụ ma gosipụta ịhụnanya gị maka ha site na mmegharị ahụ. Ihe ịtụnanya na - enweghị atụ maka ndị na - enweta igbe ahụ. Tinye n’ime na-enyere aka ịchekwa ngwaahịa ndị ahụ. Can nwere ike iji ya maka ngwaahịa na-esighi ike.
Nke ahụ abụghị na mpụta nke igbe ihe ịchọ mma buru ibu dị mma, mana n'ime ya dịkwa oke mma. Ọ dị mma maka oge niile. Site na ụbọchị ọmụmụ ruo agbamakwụkwọ, enwere ike ị nweta igbe a onyinye n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla. Can nwekwara ike ịrịọ maka nhazi onwe gị.
Enwere ike iji igbe ngosipụta a dị arọ mara mma dịka igbe onyinye zuru oke maka setịpụrụ onyinye onyinye. Enwere ike iji ya dị ka iji nchekwa, igbe onyinye, igbe mbupu, igbe igbe kọfị kọfị igbe, igbe ịchọ mma ekeresimesi, igbe igbe tebụl dị mkpa, igbe dị iche iche dị mkpa, igbe na-esi ísì ụtọ, igbe igbe, igbe igbe agbamakwụkwọ, igbe agbamakwụkwọ, ụta agbamakwụkwọ. igbe, Lotions na igbe na-esi ísì ụtọ
Mee igbe akwadoro ihe ịchọ mma a ka ọ bụrụ nke gị ma juo onwe gị anya ka ị ga - enwe mmasị mgbe niile. Ma ọ bụ, kọọ igbe onyinye ịchọ mma maka onye ị hụrụ n'anya ma na-elekọta. Igbe a bụ ihe ewu ewu na nchekwa maka karama na ngwaahịa ndị na-emebi emebi na-etinye n'ime. Ozugbo etinyere ya nke ọma, ịkwesighi iche banyere ihe ọ bụla, igbe ahụ ga-elekọta ya. A na-edozikwa igbe ahụ. Can nwere ike ịrịọ maka nkọwapụta ndị otu anyị ga-eme mgbanwe ndị akọwapụtara. Anyị na-elekwasị anya na ime igbe ọ bụla dịte aka ma maa mma n'otu oge na nke a abụghị ihe dị iche.